UMDLALI weCapeTown All Stars, uSabelo Nyembe, uthi bazozibamba ziqine sebedlala emidlalweni yokuhlungela iqembu lesibili elizonyukela esigabeni seDStv Premiership Isithombe: BACKPAGEPIX
ISIPHEKEPHEKE somdlali wasesiswini kwiCape Town All Stars, uSabelo “Kiza” Nyembe, sithi sebekubeke emahlombe abo bengabadlali balo ukulwela ukulifaka kwiDStv Premiership.
UNyembe (30), osengumakadebona esigabeni seGladAfrica Championship, usho kanjena nje ezakhe zizodlala imidlalo yokuhlungungela ukukhuphukela esigabeni seDStv Premiership emuva kokuqeda endaweni yesithathu kwi-log yeGladAfrica.
Yize iCape Town All Stars ishaywe yiJDR Stars ngo 1-0 emdlalweni wayo wokugcina wesizini ngeledlule, kodwa igcine ikwazile ukuzibekisela indawo kumaPlay-Off ngemuva kwe-University of Pretoria eqede endaweni yesibili kwi-log.
I-All Stars izovula amaPlay-Off ngokubhekana ne-University of Pretoria ngoMeyi 29, e-Athlone Stadium, eKapa.
Igugu LeKapa namaTuks bazodlala eyokuhlunga neqembu leDStv Premiership elizoqeda endaweni ka-15 kwi-log yePremiership. Le midlalo izoqala ngoMeyi 29 isongwe ngoJuni 15.
“Indlela abaleseka ngayo iqembu abalandeli, yiyo esikhuthazayo ekutheni senze konke okusemandleni ethu ukuletha injabulo kubo. Yingakho singabadlali sesizibophezele ekutheni silwele ukulifaka kwiDStv Premiership.
Yize imidlalo yethu siyidlalela e-Athlone Stadium naseParow Park lapha eKapa, kwesinye isikhathi e-Idas Valley (Sports Ground), eStellenbosch, kodwa abalandeli bethu bakhombisa okukhulu ukuseseka uma sidlala lapha eKapa,” kusho uNyembe, odabuka oSizweni, eNewcastle.
“Bese kuvele kucaca ukuthi phakathi kweRichards Bay namaTuks iqembu ebelizowina iligi belizophuma kubo, thina bese silwela khona ukuqeda endaweni yesithathu, ukuze sikwazi ukuyodlala kumaPlay-Off.”
UNyembe ungomunye wabadlali abanamava eqenjini elicijwa ngu-Allan Freese, okubalwa kubona umgadli osemnkantshubomvu u-Eleazar Rodgers, uDavid Booysen noNdiviwe Mdabuka.
Umphathi weqembu labo, uLunga Ncwana, udayisele uTim Sukazi weTS Galaxy isitifiketi seqembu seGladAfrica ngo-2018, kodwa wabuya wasithenga kuyena uSukazi ngo-2020 ngenkathi uSukazi esethenga esePremiership kwiHighlands Park.